केन्द्रमा १० प्रतिशत मात्रै महिला ! « प्रशासन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरण निर्वाचनमा महिलाको अत्यन्तै न्यून उम्मेदवारी दिएका दलहरूले दोस्रो चरणमा पनि कम प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रमुख दलले पहिलो र दोस्रो चरण गरी जम्मा १० प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार उठाएका छन् । निर्वाचन हुने जम्मा एक सय ६५ क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाका लागि १८ महिलाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ । मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ प्रमुख तीन दलबाट जम्मा १५ जना नेत्रीले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
जम्मा ४५ जिल्लाका एक सय २८ क्षेत्रमा कांग्रेसका तर्फबाट सबैभन्दा बढी सात महिलाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । त्यसैगरी, एमालेबाट पाँच र माओवादीबाट तीन महिला चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिनेमा तेह्रथुम– १ बाट सीता गुरुङ, महोत्तरी–२ बाट किरण यादव, मकवानपुर– २ बाट महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, काठमाडौं– ३ बाट अम्बिका बस्नेत, दाङ– १ बाट सुशीला चौधरी, कैलाली– १ बाट ईश्वरीदेवी न्यौपाने र कैलाली– ५ बाट डा. आरजु राणा छन् ।
त्यसैगरी, एमालेले झापा–२ बाट पवित्रा खरेल, सुनसरी–३ बाट भगवती चौधरी, उदयपुर–१ बाट मञ्जु चौधरी, स्याङ्जा–२ बाट पद्मा अर्याल र कैलाली–१ मा गरिमा शाहलाई उठाएको छ । माओवादी केन्द्रले पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसाललाई ललितपुर– ३ बाट, उर्मिला अर्याललाई पर्सा– ४ बाट र बीना मगरलाई कञ्चनपुर– १ बाट उम्मेदवार बनाएको छ ।
दोस्रो चरण निर्वाचनका लागि बिहीबार अन्तिम उम्मेदवारी दिने महिलामध्ये कोमल ओली निकै चर्चामा रहिन् । केही समयपहिले मात्रै राप्रपाबाट एमालेमा प्रवेश गरेकी उनले एमालेबाट टिकट नपाएपछि दाङ(३ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छन् । एमालेकी प्रभावशाली नेत्री एवं पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेशसभाका लागि काठमाडौंबाट उम्मेदवारी दिएकी छन् ।
कैलाली– १ मा महिला उम्मेदवारबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । यो क्षेत्रमा कांग्रेसबाट ईश्वरीदेवी न्यौपाने र वाम गठबन्धनबाट एमाले नेत्री गरिमा शाह मैदानमा भिड्ने भएका छन् । यसअघि दुवै नेत्री समानुपातिकबाट सांसद थिए । बिहीबार उम्मेदवारी दिने कांग्रेसकी आरजु राणा प्रधानमन्त्रीपत्नी हुन् भने बीना मगर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी हुन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।